နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအတွက် ပညာရေးက အရေးကြီးသောကြောင့် ကလေးများ ကြိုးစားကြရန် အောင်လအန်ဆန် အာ?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအတွက် ပညာရေးက အရေးကြီးသောကြောင့် ကလေးများ ကြိုးစားကြရန် အောင်လအန်ဆန် အာ??
မြန်မာရွေ့လျားပညာရေး စီမံကိန်း (myME Project) သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ မိုဘိုင်းဘတ်စ်ကားများဖြင့် ကလေးငယ်များအား ပညာသင်ကြားပေးနေသည့်အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အောင်လအန်ဆန်သည် အဆိုပါစီမံကိန်းဖောင်ဒါ ဦးတင် မောင်မောင်အေးနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ခြင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အောင်လအန်ဆန်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်ဘူတာကြီးရှေ့၌ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် မြန်မာရွေ့လျားပညာ ရေးစီမံကိန်း (myME Project) ဘတ်စ်ကားသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ပညာသင်ကြားနေသည့် ကလေးများနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံ၍ ကလေးများသိလိုသော မေးခွန်းများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ကလေးများ၏ မေးမြန်းမှုကိုအောင်လအန်ဆန်က ”ကျွန်တော်ဒီကို ဘာကြောင့်လာသလဲဆိုတော့ ကျွန် တော့်ရဲ့ညီ၊ ညီမတွေကိုအရမ်းချစ်လို့၊ နောက်ပြီးတော့ အားလုံးကြိုး စားချင်စိတ်ရှိအောင် ဒီကိုလာရ ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် အောင်လအန်ဆန်သည် ရန်ကုန်ဘူတာကြီးရှေ့မှ သိမ်ဖြူမီးရထားရပ်ကွက်၊ ဦးဖိုးကြားလမ်းရှိ သာသနာ့ဟိတ ဓမ္မာရုံတွင် ကလေးများအားကိုယ်ခံပညာ အခြေခံများလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီး အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ် One Championship ပြိုင်ပွဲအမှတ်တံဆိပ်ပါလက်အိတ်များ ပေးဝေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိကလေးငယ်များ၏ပညာရေးအတွက် ပေး လိုသည့်မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်ပတ်သက်၍ ဒီမိုကရေစီတူဒေးမှ မေးမြန်းမှုအပေါ် အောင်လအန်ဆန်က”ကလေးတွေ အရမ်းကြိုးစားကြပါ။ ပညာရေးဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်”ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ အောင်လအန်ဆန်သည် လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံကွင်းကြီး၌ One Championship ပြိုင်ပွဲလိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံလုပွဲအဖြစ် ဘရာဇီးကစားသမား မာချာဒိုနှင့်ရင်ဆိုင်ထိုးသတ်မည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပြိုင်ပွဲအတွက် အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။